ကလေးတွေနဲ့အတူတူရှိမယ့်အချိန်တွေ နည်းလာပြီမို့ ဝမ်းနည်းနေတဲ့ မေမေသက်မွန်မြင့် – Cele MM
လေးတွေ ကျောင်းတက်မှာပြင်ဆင်ပေးရတော့မယ့် မိခင်တစ်ယောက်ရဲ့စိတ်ကို “ဒီလိုကျတော့… ချစ်လည်းချစ်တယ်… ဝမ်းလည်း နည်းသလိုပဲ…. အဲ့လိုလေးတွေ ပြင်ဆင်ပေးရမှာ ပျော်ပေမယ့် ကျောင်းတက်တဲ့အရွယ်တောင် ရောက်နေကြပြီဆိုတော့ ဒီရှေ့လျှောက် တနေကုန် ခွဲရတော့မယ်…. ညဆိုလည်း စာလုပ်ရမှာနဲ့ စောအိပ်ရမှာနဲ့…. ကိုယ်တွေ အလုပ်နဲ့က တူတူ အချိန်ကုန်ရတာတွေ လျော့ကုန်ပြီ…ကြိုလွမ်းနေပါပြီ” ဆိုပြီး ဝမ်းနည်းစွာမျှဝေခဲ့ပါတယ်။ မိခင်တစ်ယောက်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာအပြည့်နဲ့ ကလေးတွေ့နဲ့အတူ ပျော်ရွှင်စွာရိုက်ကူးထားတဲ့ ချစ်စရာဗွီဒီယိုလေးကို ပြန်လည်ဝေမျှလိုက်ပါတယ်နော်။